Vavaka ho an'i Masindahy Catherine avy any Siena. ? Fiarovana, fahamarinana ary ho an'ny fitiavana.
Vavaka ho an'i Saint Catherine ao Siena misy tanjona maro.
Fantatra amin'ny maha dokotera ny finoana katolika izy, noho izany dia afaka manampy antsika amin'ny raharaha misy ifandraisany amin'ny fahasalamana, ara-batana, ara-pihetseham-po ary ara-panahy.
Mpanoratra sy mpitory ny tenin'Andriamanitra eto an-tany izy ary manana fo feno halala-tanana feno fitiavan'Andriamanitra hanampy ny sahirana.
Nandritra ny taona maro dia lasa olo-masina izay ao amin'ny finoana katolika izy no voahaja ary izany dia noho ny heriny lehibe sy ny fahagagana malaza.
1 Vavaka ho an'i Saint Catherine any Siena Iza no Saint Catherine?
1.1 Vavaka ho an'i Saint Catherine ho fiarovana
1.2 Vavaka ho an'i Saint Catherine hisian'ny fahamarinana
1.3 Vavaka ho an'i Saint Catherine any Alexandria hisolo fitiavana
1.4 Ny famoizam-po ataon'ny lehilahy
2 Matanjaka ve i St. Catherine any Siena?
Vavaka ho an'i Saint Catherine any Siena Iza no Saint Catherine?
Teraka tamin'ny fianakaviana lehibe, zanakavavy faha-23 amin'ny fanambadiana.
Olon'ny sokajy ara-tsosialy ambany ambany izy ireo izay tsy namela azy hianatra fanabeazana tsara, na izany aza rehefa 7 taona izy dia nanapa-kevitra ny hanokana ny tenany ho amin'ny famonoana olona sy hanao fahadiovam-pitondrantena izay notanterahiny hatramin'ny faran'ny androny.
Niaina hatramin'ny faha-33 taonany izy ary i Dadabe Pius II no nanambara azy ho Santa de ny fiangonana katolika 29 aprily 1461.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy dia lasa olo-masin'i patron any Italia izy, nahazo ny anaran'ny Doctor of the Church ary nantsoina hoe anisan'ireo Patron Saints Eropa.
Namela soritra lehibe manan-danja ny Saint Masina ka hatramin'izao dia raisina ho iray amin'ireo asa lehibe indrindra an'ny Eglizy Katolika.
Vavaka ho an'i Saint Catherine ho fiarovana
Ry virjiny be voninahitra Catherine Catherine avy any Siena vehivavy tsara fanahy be dia be tahian'Andriamanitra!
Fitaovana ny Avo Indrindra mba hanao fahagagana, lelafo marefo ao am-piangonana, voary nomena fanomezana tsy manam-paharoa, zavaboary manan-tsaina sy malina amin'ny herimpo sy ny herim-pon'ireo paladins.
Asehoy fa hatraiza ny halehiben'ny herinao, ry masomban'Andriamanitra, mahasoa antsika mazoto handroso amin'ny hatsaram-panahy evanjelika, indrindra amin'ny fanetren-tena, fahamalinana, faharetana, hatsaram-panahy ary ny fahazotoana amin'ny fampiharana ny adidin'ny fanjakana.
Hisaja sy malala ny Tompo, ry Saint Catherine malala noho ny fahasambarana azonao avy amin'ny fahafahanao hiaraka amin'Andriamanitra ho masina ary nahazoanao avy aminy ny fahasoavana afaka manome sitraka amin'ny alàlan'ny fahagagana mitohy ataonao ho an'ireo be dia be izay mangataka azy, henoy ny fifonako feno fanetren-tena ary mahatratra ahy Ny fahatsaran 'Andriamanitrao dia manampy anao maika eo amin'ny fiainako mampihetsi-po, ao amin'ny fianakaviako, ao an-tranoko:
Raiso an-tànako mahery ny fitakiako mafy sy famoizam-po ary atolotra izany ho an'ny Tompontsika mba hahafahana mamita haingana izany.
Miangavy anao koa aho mba hanome ahy fiarovana sy fiarovana, ary amin'ny fanahafana ny hatsaranao dia hitombo amin'ny fahalalana an'Ilay Andriamanitra tokana aho ary hahatratra ny vintana tsara amin'ny olom-boafidy.
Raha mila fiarovana ianao, io no vavaka marina nataon'i Saint Catherine any Siena.
I Santa Catalina ho mpanohana an'i Italia sy Eropa dia afaka manome antsika amin'izany fiarovana ho antsika koa Na aiza na aiza misy anao etoana.
Ny ratsy sy angovo ratsy Izy ireo dia ao amin'ny tontolo iainana ary asiany ny fahafenoan'ireo olona amin'ireto vava ratsy ireto mba hanamboarana ny ml, izany no antony manosika indrindra ny vavaka fiarovana ho azy ary izany no nanolorana azy hatao isan'andro.
Amin'ny ora maraina sy amin'ny fiarahana ao amin'ny fianakaviana dia lasa fombafomba ara-panahy izay hikarakarana antsika mandritra ny andro iray isan'andro.
Vavaka ho an'i Saint Catherine hisian'ny fahamarinana
Ry Santa Catalina, inona ny zavatra tsy vitanao, ianao no mahafatifaty sy be fitiavana indrindra amin'ny mpikarakara anay, mangataka fanampiana aminao aho mba hamerenanao ny fanantenako rehetra ...
Miangavy ny fanampianao lehibe aho, hany ka lasa eo anelanelan'ny foko sy i Jesoa zanany lahy sy ireo vonona hampionona ahy aho, miantso anao aho izay vonona hanokatra ny sandrinao mba hampahery ahy sy hanome ahy fanamaivanana sy vahaolana raha toa ka very avokoa ny zava-drehetra.
Masindahy Catherine, virjiny mahery sady feno fitiavana aho, anio dia mifoha sy mikatsaka ny fiarovanao any an-danitra aho, satria tsy tsinontsinona aho raha tsy eo ny fanohananao sy an'Andriamanitro.
Ilay vehivavy malalako sy mahafinaritra ahy, ilay jiro manokana izay mipetraka eny amin'ny havoana, mampiasa azy io mba hampahazava ny lalako.
Ampionony ary ampio aho hanamaivana ny fanaintainako am-panahy.
Miangavy ny fonao lehibe aho mba hahafahanao mandre ny fitalahoako.
Ilay Saint Catherine maloto sy be voninahitra omena ahy noho ny hery tsy manam-petra nomen'Andriamanitra anao, mangataka anao aho hanoloranao am-panetren-tena sy ny fanelanelanana amin'ity fahasahiranana ity, miaraka amin'ny fanantenana fa napetrako tamin'ny tànanao mamy sy voatahy: ampio aho
(inona no tokony azonao)
Misaotra anao tsy misy fetra aho noho ny fihainoanao ireo fitarainana nataoko, satria azoko antoka fa efa reko ny vavaka nataoko taminao, ary na dia sarotra be aza ny famahana azy dia manana fiarovana aho eny an-tananao, tsy isalasalana fa ho tanteraka izany, satria tsy misy olona diso fanantenana foana angataho ny ankafizanao, na inona na inona tsy mety ho azy ireo.
Ry Saint Catherine sambatra, ianao izay mifona amin'ny tsy azo atao, mivavaha amin'Andriamanitra ho an'ny filako sy ny alaheloko, averiko daholo ny fanantenako amin'ity vavaka ity, matoky ny fiarovanao feno fitiavana aho.
Mitahy ny fiainako i Catalina malalako, aza avela hitarika ahy amin'ny fomba samihafa.
Hanaraka anao aho amin'ny finoana lehibe, fanetren-tena ary fanoloran-tena.
Toy izao no nahatonga izany. Ka izay ihany. Ka izay ihany. Ho izao no hitranga.
Mivavaha vavaky Saint Catherine ho an'ny ny rariny amin'ny fotoana ilana.
Hatramin'ny mbola kely izy dia niatrika zava-tsarotra noho ny maha-kilasy ambany sy fianakavian'ny fianakaviana lehibe.
Fantaro tsara hoe inona ny fandehanana ny olana izay lasa tsy rariny eo imason'Andriamanitra, izany no mahatonga ny mpiara-miasa amintsika ho olona azontsika itokisana hanampy antsika amin'ny raharaha tsy maintsy ampiharina amin'ny fahamarinana marina eto an-tany na ara-panahy.
Vavaka ho an'i Saint Catherine any Alexandria hisolo fitiavana
Santa Catalina ianao izay afaka mampifanaraka ny olona maro ...
Manaova fiantrana kely ho ahy, hitiavana, ataovy ny fahamendrehana sy ny fahamarinana, izay mahatonga fitiavana, ao am-poko afaka miditra sy mameno ahy amin'ny fifaliana.
Te-hahafantatra ny tena fitiavana aho, ny tena fahatsapana, Santa Catalina ianao izay manana fahefana lehibe amin'izany ...
Omeo ahy izany famindram-po izany, enga anie ny fangatahako ho tonga aminao, mba hahazoako mandray ny fitahianao, Saint Catherine tia, fitiavana tonga lafatra ary tsy misy lainga, ianao izay manana hatsaram-panahy ary tena henon'ny rehetra ianao. el tontolo manontolo.
Mankanesa aty amiko ary omeo fotoana ahazoanao ireo fitahianao aho, maniry anao handefa ny vavakao aho.
Ny vavaka ataoko amin'Andriamanitra dia ny mba hahafahany manao ny fiainako ho feno fitiavana, feno fiadanam-po, azonao atao ny manao azy mahagaga Santa Catalina ...
Mangataka anao aho hanome ahy fitiavana, fitiavana bebe kokoa ary fitiavana bebe kokoa, fifaliana be fifaliana, firariana soa, eritreritra tsara, fihetsika tsara, ampio aho hahomby amin'izany, ny fitiavana dia ho toy ny dingana, lalana ...
Masindahy Catherine, ianao izay afaka manao ny zava-drehetra, omeo ahy ary manana ny tena fitiavana aho tonga aty amiko, matokia ny herinao sy ny hatsaranao.
Mila misolo ny anaran'ny olona malalanao ao anatin'ny vavaka ho an'i Saint Catherine avy any Alexandria ny fitiavana.
Fantatra ho patron'ireo vehivavy ireo tsy manana mpifankatia izy ireo, mpampianatra sy mpianatra.
Nanana fahendrena, be herim-po, hery, fahaizana ary faharanitan-tsaina izy tamin'ny fiainana. Manana izay rehetra ilainao izy ireo hanome anay ny fanampiana ilaina amin'ny raharaha fihetseham-po.
Izy io dia afaka manampy antsika hiampita ny lalantsika amin'ilay olona voatokana ho antsika na, raha ilaina dia manampy antsika hitazona ny firindrana any amin'ireo trano izay iharan'ny fahafatesana ny fitiavana.
Handroso isika vavaka hahakivy lehilahy an'i Santa Catalina de Siena.
Ny famoizam-po ataon'ny lehilahy
Ry Saint-Saint Malalako,
Ianao izay tsara tarehy toa el sol, tsara tarehy toa la luna, ary tsara tarehy toy ny kintana.
Niditra tao an-tranon'i Abrahama ianao ary nanorotoro olona 50.000, be herim-po toy ny liona, nanalefaka ny fon'ny (hoy ny anaran'ilay olona) ho ahy.
(Lazao ny anaran'ilay olona) raha vao mahita ahy izy dia hivoaka ho at me amiko, raha atory izy, tsy hatory, raha mihinana, tsy hihinana.
Tsy hanana fiadanana izy raha tsy tonga hiresaka amiko.
Izy no hitomany ho ahy, ho ahy izy hitomany, tahaka ny fofonain'ireo Virjiny Maria niaraka tamin'ny zanany notahiny.
(Lazao ny anaran'ilay olona intelo, mikapoka ny tongotra havia amin'ny tany)
Eo ambanin'ny tongotro havia dia manana anao aho miaraka amin'ny telo, na amin'ny teny efatra, na amin'ny fonao.
Raha mandeha matory ianao dia tsy hatory, raha tsy misakafo, tsy misakafo, fa tsy mipetraka fa raha tsy miaraka amiko ianao hiresaka ary hilaza amiko hoe tia ahy ianao, dia omeo ahy ny soa rehetra anananao.
Ianao dia ho tia ahy amin'ireo vehivavy rehetra eto an-tany, ary ho toy ny raozy tsara tarehy sy madio foana aho.
Heverinao fa ity vavaka ity ho an'i St. Catherine hanary famoizam-po ny lehilahy iray dia mahagaga!
Ity iray ity vavaka Tsy fitaovana hanodikodinana ny olona hanohitra ny sitrapony, fa mifanohitra amin'izany no lasa fihetsika feno fitiavana sy finoana fa avy any an-danitra no mitso-drano izay matetika amam-pitiavana amin'ny asantsika.
Io lehilahy izay nandao ny tranony, izay nanapa-kevitra mandao trano na fifandraisana misy fitiavana Afaka miverina ho kivy izy mba hanana izay navelany indray. Izany no antony lehibe indrindra amin'ity vavaka manokana ity.
Matanjaka ve i St. Catherine any Siena?
Isaky ny manam-pinoana ianao dia afaka manampy antsika amin'ny toe-javatra ilaina ilaintsika.
Na manao ahoana na manao ahoana sarotra na tsy azo atao ny toe-javatra ahitantsika ny tenantsika dia afaka manontany amim-pinoana matoky isika fa ny fahagagana dia avy amin'ny fahasaro-po haingana noho ny nantenaintsika.
Hararaoty foana ny herin'ny vavaka ho an'i Saint Catherine any Siena!
Vavaky mahery sy mahagaga amin'ny Dadabe Noely
Vavaka mafy ho an'i Saint Helena